Maaniany (vahoaka) - Wikipedia
(tonga teto avy amin'ny Vahoaka maaniany)
Ny Maaniany na Daiàka maaniany na Daiàka baritô atsinanana dia zana-bondron' ny vahoaka daiàka monina ao amin' ny faritanin' i Kalimantàna afovoanay ao amin' ny nosy Bôrneô.
2 Ny Maaniany ankehitriny
Araka ny lovantsofina dia nipoitra avy amin' ny mponina amorotsiraka ao amin' ny faritra atao ankehitriny hoe Banjarmasin ny Maaniany; nilaozan' izy ireo io faritra io tamin' ny taonjato faha-15 na faha-16 rehefa nanjakan' ny fiteny maley sy ny fivavahana silamo. Ny lovantsofin' ny Banjara (anaran' ny Maley ao amin' ny morontsiraka atsimo any Bôrneô) dia manaiky ny fisian' ny vahoaka maniany ao amin' ny vondrona misy azy (vondrona maley), ankoatry ny mpiavy maley sy javaney ary bojy. Izany fisian' ny Maaniany tany amorontsiraka izany dia hamafisin' ny fitenin' izy ireo izay mpihavana anakaiky amin' ireo fiteny aty Madagasikara, araka ny fampitahana ny fiteny maaniany amin' ny fiteny malagasy merina (mifandray ny 50 hatramin' ny 54 %n' ny voambolan' ireo fiteny roa ireo). Azo atao ny manatsoa-kevitra fa talohan' ny hahalasa vahoaka daiàka azy ireo dia tantsambo mpandeha an-dranomasina lavitry ny morontsiraka ny razamben' ny Maniany.
Raha marina izany lovantsofina izany dia midika izany fa ny Maniany no niantombohan' i Java tamin' ny taonjato faha-14. I Banjarmasin mantsy dia hita miaraka amin' ireo tany manompo ny fanjaka-mpanjakan' i Majapahit ao atsinanan' i Java izay lazain' ny tononkalo Nagarakertagama (voasoratra tamin' ny taona 1365 tamin' ny andron' ny mpanjaka Hayam Wuruk (nanapaka tamin' ny taona 1350-1389). Nahitana sisan-javatra taloha tamin' ny vanimpotoan' i Majapahit ny ao amin' ny faritanin' i Kalimantàna Atsimo.
Ny Maaniany ankehitriny[hanova | hanova ny fango]
Taorian' ny fanaovany fambolena mandoro ahitra nandritra ny taonjato maro dia nanjary mpamboly miorim-ponenana ny Maniany ankehitriny, ka ny fambolem-bary sy ny fitrandrahana hevea no tena imasoany. Amin' ny ankapobeny dia nanaraka ny protestantisma izy ireo tamin' ny taompolo faramparany tamin' ny taonjato faha-20. Vitsy an'isa (10 % eo) no manohy manaraka ny fivavahan-drazana (atao amin' ny fiteny ôfisialy hoe kaharingan). Toy ny Ngajo mpifanolo-bodirindrina amin' izy ireo ao andrefana ihany koa izy ireo ka isan' ny vondrona daiàka nadray be indrindra ny kolontsaina tandrefana ao amin' ny tapany atsimon' i Kalimantàna.
Tamin' ny taona 2000 dia niisa 70 000 any ho any ny vahoaka maaniany. Izy ireo no foko lehibe ao amin' ny vondrom-pokon' ny Baritô atsinanana, ankoatry ny vondrona hafa vitsy anisa kokoa miparitaka ao atsinanan' ny tany onenan' izy ireo (indrindra ny Dosona Deiaha, ny Samihima, sns).
Ny fiteny maaniany dia ao amin' ny zana-tsampan' ireo fiteny baritô lehibe, ao amin' ny sampana malaiô-pôlinezianan' ny fianakaviam-piteny aostrôneziana. Isan' ny mampiavaka ity zana-tsampana ity, andaniny, ny fisian' ny fiteny hafa toy ny fiteny malagasy tenenina ao Madagasikara (izay miseho amin' ny endrika fitenim-paritra maro) sy ao Maiôty (ny fiteny kibosy na sibosy), ary ankilany, ny fisian' ireo fiteny sama-bajao izay ahitana ireo fitenin' ny vahoaka bajao.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Maaniany_(vahoaka)&oldid=999918"
Voaova farany tamin'ny 5 Janoary 2021 amin'ny 08:47 ity pejy ity.